Breaking News Mootummaan naannoo Amaaraa teessoo isaa Finfinnee taasifachuuf ijaarsa isaa Finfinneetti jalqabe Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBreaking News Mootummaan naannoo Amaaraa teessoo isaa Finfinnee taasifachuuf ijaarsa isaa Finfinneetti jalqabe
Breaking News: Mootummaan naannoo Amaaraa teessoo isaa Finfinnee taasifachuuf ijaarsa isaa Finfinneetti jalqabe
Biraanuu Juulaa Abbaa Torbee fi humnoota kaan Qeellam keessaa guurree hiineerra jedhe. Har’ammoo Baankiin saamame jechuutti jiru. Bakka waan hundaa hiitanitti eenyutti qabatturee? Warri mana Fissahaa fuuldura dhaabatee guyyaa saafaa saame RIB dha. Har’as waraanuma Biraanuu Juulaatu Baankii saamaa jiru. Gara Ciroottis miiliyoona 80 saamanii uummatatti qabatan. Biraanuuu Juulaa shiftaa qofaatti ijaarratee jira!
Qeerroowwan kaleessa galgalaa
Ambootti qabaman keessa
Bakkalcha Maammoo İsa tokkoo dha
Sagalee Bosonaa fi qeerroo iyyaa iyya waliif dabarsaa !!
ilaalaa yaalammii koo.
1,Geetachoo Asaffaa fi Gareen isaa Otoo Tigraay mashagee qaamani mootummaa qabee seeratti dhiyeessu dhabamee jiruu.
2,Ummanni Tigraay hanga funyaaniitti hidhatee Meeshaa waraanaa Biyya keessaa saamaa turan kuufatanii lolaaf of qopheessaa jiru.
3,Naannoon Amaaraa /waraana 150,000 ol/leenjisee qopha’eera,Affaar,Somaalee,Gumuz,Kkf hundi bifa qinda’een hidhataniiru.Aggaammii kamiifuu of irraa qoluuf Qopha’aaniiru.
4,opdon garuu WBO Abdii keenya .Kana booda oromoon oromoo hin ajjeesu jechaa Duula WBo irratti labsuun maal yaaddeetu opdon ?
Opdon duraanuu poolsiin oromiyaa meeshaa hin qabu nageenya oromiyaa tikkisuu hin dandeenye.WBO Hidhatee wabii oromiyaa taatee jirtu Makalakayaan akka isaan barbadeessu ifatti labsaniiru.
Yaroo gama hundaan oromoon harka qullaa ta’ee Habashaan akka oromiyaa deebi’ee weeraru opdon haala mijeessaafii akka jiran hubanneera.Oromoo waraanaan cabsuun karoora opdo tiin hin raawwatu.Opdon yaroo dhumaaf oromiyaa keessaa WBO balleessutti ofiif ishiitiif opdon baduuf jirti.Hundii keessan arguuf jirtu.
WBOn maqaa seenaa qabeessadha. Maqaa dhiiga gootowwan kumaatamaan kabaja saba kanaaf wareegamanii. Maqaa kanaan yakka hojjachuun dhiiga gootowwan kaleessaatiin qoosuudha. Dhimma kana yeroo adda addaatti hoggansa ABOfi ajajjoota WBO beekamanitti himnee, nuhii miti jechaa turan. Hamma WBOn bosona jirutti kamtu dhugaan WBO kamtu fakkeessituudha kan jedhu adda baasuun hin danda’amu. Hoggansi siyaasaafi ajajni waraanaas yakka maqaa iWBOtin dalagamu waakkatanii itti gaafatamummaa jalaa bahuun hin danda’amu. Kanaafuu ABOn yakka akkanaa maqaa seenaa qabeessaa dhaaba kanaafi waraana isaa xureessu kana dhaabsisuuf falli jiru tokkichi WBO bosonaa baasuun akka waliigaltee mootummaa waliin seenametti seera qabsiisuudha. Yakki kun itti fufnaan maqaa baduu qofa osoo hin taane mataan baduutu dhufa. Dhaamsaafi gorsa lammumaati
By Moonenus Hundarraa
“Saamichi kamuu balaaleffatamuu qaba. Gareen maqaa ABO dhaan qarshii funaanaa ture, gareen maqaa WBO dhaan saamu, ajjeesu, nama ukkaamsu balaaleffatamuu qaba. Garee kana qaamni kamuu bobbaasuu danda’a. Ani ABO tti ykn WBO tti quba qabuu kanatu na dhiba. Maqaa ABO fi WBO tiin yakki yoo raawwate hanga ABO/WBO hin taanetti maaliif ABO/WBO abaarraa? Dhuguma ABO/WBO tu kana godha taanaan ragaadhaan deeggaramanii seeraan gaafachuudha. Ololaa fi piropogaandaa deemaa jiru gaafan ilaalu garuu ani ADWUI’n shakka. Shakkii kooti.”